MonaCoin စျေး - အွန်လိုင်း MONA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို MonaCoin (MONA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ MonaCoin (MONA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ MonaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $122 964 928.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ MonaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
MonaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MonaCoinMONA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.96MonaCoinMONA သို့ ယူရိုEUR€1.66MonaCoinMONA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.5MonaCoinMONA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.79MonaCoinMONA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr17.71MonaCoinMONA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.12.4MonaCoinMONA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč43.79MonaCoinMONA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł7.34MonaCoinMONA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.63MonaCoinMONA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.74MonaCoinMONA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$43.92MonaCoinMONA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$15.2MonaCoinMONA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$10.66MonaCoinMONA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹147.17MonaCoinMONA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.331.28MonaCoinMONA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.69MonaCoinMONA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.97MonaCoinMONA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿61.25MonaCoinMONA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥13.67MonaCoinMONA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥207.81MonaCoinMONA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2332.63MonaCoinMONA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦758.84MonaCoinMONA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽144.59MonaCoinMONA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴54.38
MonaCoinMONA သို့ BitcoinBTC0.000168 MonaCoinMONA သို့ EthereumETH0.00498 MonaCoinMONA သို့ LitecoinLTC0.034 MonaCoinMONA သို့ DigitalCashDASH0.0202 MonaCoinMONA သို့ MoneroXMR0.0211 MonaCoinMONA သို့ NxtNXT137.54 MonaCoinMONA သို့ Ethereum ClassicETC0.282 MonaCoinMONA သို့ DogecoinDOGE559.34 MonaCoinMONA သို့ ZCashZEC0.0207 MonaCoinMONA သို့ BitsharesBTS75.58 MonaCoinMONA သို့ DigiByteDGB67.12 MonaCoinMONA သို့ RippleXRP6.68 MonaCoinMONA သို့ BitcoinDarkBTCD0.0668 MonaCoinMONA သို့ PeerCoinPPC6.55 MonaCoinMONA သို့ CraigsCoinCRAIG883.17 MonaCoinMONA သို့ BitstakeXBS82.66 MonaCoinMONA သို့ PayCoinXPY33.84 MonaCoinMONA သို့ ProsperCoinPRC243.19 MonaCoinMONA သို့ YbCoinYBC0.00104 MonaCoinMONA သို့ DarkKushDANK621.48 MonaCoinMONA သို့ GiveCoinGIVE4195.1 MonaCoinMONA သို့ KoboCoinKOBO435.09 MonaCoinMONA သို့ DarkTokenDT1.81 MonaCoinMONA သို့ CETUS CoinCETI5593.37